China Silver Alloy Wires mpanamboatra sy mpamatsy | ZHJ
Vidin'ny FOB: US $ 480 - 700 / Tons
Min.Order Quantity: 1 Ton / taonina
Fahaizana manome: 10 Ton / taonina isam-bolana
Ny volafotsy sy ny volafotsy tsara toto (FAg) dia manana fitarihana herinaratra sy hafanana avo lenta, fanoherana ambany sy maharitra ary fahaiza-miasa tsara. Fa ny fanoherana ny volafotsy amin'ny fikajiana ny arc sy ny welding welding dia voafetra, ny tanjaky ny mekanika dia ambany, Noho ny habetsaky ny nikela ao amin'ny volafotsy tsara toto, ny fanoherana ny fikajiana arc sy ny tanjaky ny mekanika dia avo kokoa noho ny volafotsy.
Ampiasaina be amin'ny fitaovana ambany ankehitriny, toy ny relay, timer, switch auxiliary ho an'ny kojakojan-tokantrano, switch switch, sns.
Elec. Fanoherana (pQ • cnn)
Fomba fanamboarana Extruding-Rolling Mampiditra -Mamoaka Extruding-Rolling Mampiditra -Mamoaka
Ny fitaovan'ny AgNi dia manana fanoherana avo kokoa amin'ny fikaohon-tany sy ny fantsom-pifandraisana noho ny Ag na FAg. Samy nohatsaraina ireo fananana roa ireo miaraka amin'ny fitomboan'ny atiny Ni. Ny fitaovan'ny AgNi rehetra dia mampiseho fahaiza-miasa ary mora lasina hifandray amin'ny mpanohana. Fironana ambany amin'ny famindrana material amin'ny fampiharana DC. Ny akora AgNi dia fitaovana fiarovana tontolo iainana.
Ireo fitaovam-pifandraisana AgNi dia mahita fampiharana marobe amin'ireo fitaovana fanovana herinaratra ambany. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny relay, contactors kely, switch jiro, mpanara-maso ny mari-pana ary koa amin'ny switch switch (ampiasaina amin'ny tsiroaroa mifandraika asymmetric, ohatra, amin'ny fitaovanaAgC, AgZnO naAgSnO2).
Ny fifandraisana AgCdO dia an'ny vondron'ireo be mpampiasa indrindra eo amin'ny sehatry ny fitaovana elektrika ambany. Izy ireo dia manambatra fanoherana mahafa-po amin'ny fanoherana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fanoherana ny fikaohon-tany ary ny fanoherana kely dia kely amin'ny fiainany fanompoana manontolo. Izy ireo dia novokarina tamin'ny teknika roa samy hafa, alohan'ny oksidasiôna-sinter-extruding ary oxidation anatiny. Amin'ireo tranga roa ireo, ny atin'ny Cd0 dia mety manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20wt.%, Na izany aza, ny Cd sy ny Cd0 dia heverina ho mampidi-doza amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Noho izany antony izany dia voarara ny fampiasana fitaovanaAgCdO any amin'ny firenena maromaro.
Ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny karazana fitaovana fanovana malefaka ambany. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny microswitches, relay, switch jiro, contactors, switch ho an'ny fitaovana ao an-trano, karazana switch switch, ary koa amin'ny karazana fanapahana faritra.
tariby AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO AqCd0 AgCdO
Atiny CdO (wt.%) 10 ± 1 13.5 ± 1 15 ± 1 10 ± 1 12 ± 1 15 ± 1 17 ± 1
Hamafin'ny HV ≥70 ≥75 ≥75 ≥70 ≥70 ≥75 ≥75
Fomba fanamboarana Pre-oxidation-Sintering-Extruding Oksidansa anatiny
Ny fanoherana mahery vaika amin'ny welding welding dia mampiavaka ny akora AgZnO. Izy ireo koa dia mampiseho fanoherana tsara amin'ny fikaohon-tany. Ny fanoherana ny fanoherana ny AgZnO dia mazàna avo kokoa noho ny an'ny AgCd0. Ny AgZnO dia azo novokarina tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanodinana alohan'ny oksidasiana - ny teknika fanentanana, ny fampifangaroana-ny fampifangaroana ary koa ny fitrandrahana ao anaty. Ny akora AgZnO dia fitaovana fiarovana ny tontolo iainana.
Ampiasaina matetika amin'ny mpamaky faritra, indrindra amin'ny mpandika faritra. Ny sehatry ny fampiharana hafa dia ny switch an'ny fiarovan'ny motera, ireo mpandika faritra misy ankehitriny ary ireo relay AC.
ZnO atiny (wt.%)
AgSnO2 / AgSn021n203 dia fitaovana fifandraisana amin'ny herinaratra ara-tontolo iainana. Izy ireo dia manana fampisehoana tsara amin'ny fananana fanoherana ny fikaohon-tany sy fanoherana ny welding, ary manana fananana famindrana anti-materialy tsara ao amin'ny faritra DC switching. Ny fizotry ny famokarana lehibe indrindra dia ny fizotry ny fitrandrahana oksidra ao anaty, ny fizotry ny fitrandrahana alim-bovoka, ny fizotran'ny metallurgy vovoka, ny fizotry ny simika simika, sns.
Ampiasaina be amin'ny karazana contactors, relay, mpandika faritra ary switch sns.
Votoatiny SnO2 (wt.%)
Elec. Fanoherana (pO • cm)
Elec. Fiaretana (10 • cm)
AgSnO2lAgSn021n203 dia fitaovana fifandraisana amin'ny herinaratra ara-tontolo iainana. Izy ireo dia manana fampisehoana tsara amin'ny fananana fanoherana ny fikaohon-tany sy fanoherana ny welding, ary manana fananana famindrana anti-materialy tsara ao amin'ny faritra DC switching. Ny dingana lehibe indrindra amin'ny famokarana dia ny fizotry ny fitrandrahana oksidra ao anaty, ny fizotry ny fitrandrahana alim-bovoka, ny fizotran'ny metallurgy vovoka, ny fomba fandrakofana simika, sns.
Elec. Fanoherana (p0 • cm)
Previous: Torohevitra mifandray amin'ny herinaratra
Manaraka: CONTACT CONTACT TRANO
Wire Silver AgCdo10